FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA ANY PIT HEELER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika any Pit Heeler
Alika omby piter amerikana / alika fiompiana ostraliana alika mifangaro
Afo ny Pit Heeler amin'ny 1 1/2 taona
Teriteran'ny Pit Pit Blue
Teriteran'ny Pit Pit Red
Ter Terra Mena
Ny Pit Heeler dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny American Pit Bull Terrier ary ny Blue Heeler . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
(Fanamarihana: ny Blue Heeler dia antsoina koa hoe Australian Heeler, Hall's Heeler, Queensland Heeler, Australian Cattle Dog, Australian Cattledog ary Australischer Treibhund.)
Allie the Pit Heeler amin'ny 2 taona— 'Mpinamana be izy!'
Vega the Queensland Heeler / Pit Bull mix (Pit Heeler) amin'ny maha alika kely azy amin'ny 5 volana —'Vega be fitiavana be ary tia mifampikasoka. Mpianatra haingana izy ary tena manan-tsaina. Izy dia manana angovo be ary milalao fa hipetraka aminao. Tiany ny milalao trondro ary manana sasany firariana fiandrasana . Tena sariaka amin'ny olon-kafa izy raha manodidina azy izahay. Tia milelaka sy milalao izy. Miaro ao an-trano koa izy miaraka amin'ny tabataba sy olon-tsy fantatra. Izy dia iray amin'ireo karazana fitiavana be fitiavana indrindra nananako. Alika tsara ho an'ny fianakaviako i Vega. '
Rosie the Pit Heeler amin'ny maha alika azy amin'ny 4 volana— 'Mavitrika be izy. Hitanay fa manana izy Red Heeler instincts toy ny manenjika sy manaikitra amin'ny voditongotra. Izy koa dia malina sy mahatoky ho antsika tompony. '
Rosie the Pit Heeler amin'ny maha alika azy amin'ny 4 volana
Rosie the Pit Heeler amin'ny maha alika azy amin'ny 8 herinandro
Hijery ohatra hafa momba ny Pit Heeler
Sary Pit Heeler
sisin-tany collie zanak'ondry mpiompy australianina
Retriever volamena 7 volana
chihuahua / fifangaroana pincher kely